काठमाडौंका पुरुष बे’श्याको कमाई : एकपटक सेवा गरेको १० देखि २५ हजारसम्म – Kavrepati
Home / रोचक / काठमाडौंका पुरुष बे’श्याको कमाई : एकपटक सेवा गरेको १० देखि २५ हजारसम्म
admin September 17, 2021	रोचक Leaveacomment 636 Views
पु’रुष यौ’न व्यवसायीले एकजना महिलालाई सन्तुष्टि दिलाएबापत एकपटकको १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको सम्बद्ध संस्थाहरुको भनाइ छ ।
एक अध्ययनका अनुसार पछिल्लो समय संगठित रूपमा नै पु’रुष यौ’न व्यवसायीहरू सक्रिय भएका छन् । भने उनिहरुले सरदरमा १० देखी २५ हजार दैनिक कमाई गर्ने बताइएको छ ।
बेरोजगारीका कारण पु”रुष यस्तो व्यवसायमा सक्रिय भएको पाइएको छ । उनीहरूले विदेशमा गएका नेपालीका श्रीमती, आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका महिला, लाहुरेका श्रीमती तथा एकल महिलालाई मुख्य नि’शाना बनाएर मायाजालमा फ’साउनेदेखि ग्राहक बनाउने गरेको पाइएको छ ।
अझ त्यस्ता समुदायका कतिपय महिलाले मसाज सेन्टर, बार तथा रेस्टुरेन्ट, होटेल, क्यासिनो तथा म’ हिला यौ’न व्यवसायीमार्फत पु’ रुष यौ’न व्यवसायी खोज्ने गरेका छन् ।
पुरुष व्यवसायीका ग्राहक आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका हुने भएकाले उनीहरूले अन्य सेवासुविधासमेत पाउने गर्छन् ।केही ब्यक्तिको भनाइअनुसार उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पकेट र मोबाइल खर्चदेखि सपिङका लागि पैसा समेत महिला ग्राहकले दिने गरेका छन् ।
अन्य समाचार : महिलाहरुको शरीरमा किन आउँछ (स्ट्रेच माक्र्स) सेता धर्सा ? यस्तो छ खास कारण ! अधिकांश महिलाको शरीरका विभिन्न भागमा सेता धर्सा देखिन्छ । पेट, हिप, पिँडौला, स्तनआसपासको छालामा सेता धर्सा बाक्लै हुन्छन् । छालामा आउने यस्ता सेता धर्साका कारण युवतीहरू बढी चिन्तित बन्ने गरेको पाइन्छ ।
शरीरका केही भाग खाली देखिने गरी साडी, ब्लाउजलगायत खुला कपडा लगाऊँदा सेता धर्साहरू दुनियााका नजरमा पर्न पुग्छन् । सेता धर्साकै कारण युवतीहरू सौन्दर्यमा आँच आएको महसुस गर्छन् । आखिर के हुन् यी सेता धर्सा ? किन आऊँछ ? छालारोग चिकित्सकहरू यसो भन्छन् :
के हुन् सेता धर्सा ?
शरीरका विभिन्न भागमा छालामा देखिने सेता धर्सालाई ‘स्ट्रेच माक्र्स’को नामले चिनिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा ‘स्ट्रिया’ भनिन्छ । नाइटोमुनिको भाग, तिघ्रा, पाखुरा, हिप, स्तनको वरिपरिका छालामा यस्ता धर्सा देखिन्छन् । कतिपयमा राता धर्साहरू देखिने गरे पनि अधिकांशमा सेता धर्सा नै देखिन्छ । यो समस्या धेरैजसो महिलामा देखिने गरेको भए पनि पुरुषमा पनि नदेखिने भने होइन । ७० प्रतिशत महिलामा देखिन्छ भने पुरुषमा ३० प्रतिशत देखिने गरेको पाइएको छ ।
सेता धर्सा आउने कारण
शरीरमा सेता धर्सा आउने कारण विभिन्न छन् । केही रोगका कारण पनि यस्ता धर्सा आउने गरेको पाइन्छ । तर, अधिकांशमा आउने कारण भने एउटै छ । त्यो हो, छोटो समयमा शरीर अत्यधिक मोटाउनु र छोटो समयमै मोटोपन घट्नु।
बच्चा जन्माइसकेका महिलाको शरीरमा सेता धर्सा बढी देखिनुको प्रमुख कारण यही हो । बच्चा पेटमा हुँदा शरीर अत्यधिक मोटाउने र छाला तन्किने गर्छ । बच्चा जन्मिसकेपछि तन्किएको छाला एक्कासि खुम्चिन पुग्छ । यसबीचमा छालामा सेता धर्का बनिसकेका हुन्छन् । अत्यधिक तन्किँदा छालाको भित्री भागका रेसाहरू फाट्न पुग्छन् । यतिवेला छालाको माथिल्लो तह पातलो बनेको हुन्छ भने भित्री तह फाटेको हुन्छ । यति नै वेला सेता धर्साहरू जन्मिन्छन् । यस्तो बेला छाला धेरै कन्याउादा धर्साहरु झनै बढी देखिन सक्छन् ।
युवतीहरूमा पहिलोपटक महिनावारी हुँदा शरीरका विभिन्न भाग मोटाउने हुँदा सेता धर्सा बस्ने गर्छन् । स्तन, हिपलगायतका ठाउँमा यहीवेला ‘स्ट्रेच माक्र्स’ देखिइसकेको हुन्छ । कतिपय व्यक्तिमा भने स्टेरोइड औषधिको अत्यधिक प्रयोगले पनि ‘स्ट्रेच माक्र्स’ देखिन्छ । यो पुरुषहरूमा बढी हुन्छ ।
लक्षण र उपचार
‘स्ट्रेच माक्र्स’ हुनुअघि कुनै पनि लक्षण देखिँदैन । यस्तो समस्या आउन नदिन पूर्वज्ञान लिएर विशेष अवस्थामा सचेत हुने नै हो । व्यायाम र खानपिनमा ध्यान दिँदै शरीर सन्तुलित बनाउने नै हो । बेलैमा सचेत भए सेता धर्साहरूको समस्या निम्तिँदैन । त्यसो त यस्ता सेता धर्सा कुनै रोग भने होइन । शारीरिक स्वास्थ्यमा यसले कुनै असर पुर्‍याउँदैन । तर, सौन्दर्यका लागि भने यो घातक देखिन्छ । विभिन्न मस्चराइजरको प्रयोगले यस्ता धर्सा मेटाउने पनि गरिन्छ । लेजर गरेर पनि हटाउन सकिन्छ ।
Previous कहाँबाट आयो कक्षा ६ मा पढ्ने यि दुई बालकको खातामा करोडौँ भारु ? त्यो के गरे झनै रोचक !
Next कसरी गर्छन् महिलाले ‘ह’स्त मै’थुन’ ?